Waxaan idinku soo dhawaynaynaa adiga iyo qoyskaaga barnaamijka Missouri WIC. Fadlan na soo wac haddii aad wax su'aalo ah qabtid adigoo garaacaya: 573-751-6204 ama (lacag la'aan) 800-392-8209. Waxaad sidoo kale emayl ugu diri kartaa Missouri WIC halkan - WICinfo@health.mo.gov.
Qaabka aad u dukaameysato cuntadaada WIC ayaa ku fududaan doonta kaarka cusub ee 'Missouri eWIC' ka! Fiiri fiidiyowyadan si aad wax badan uga barato sida loo isticmaalo kaarkaaga.
Sida Loogu Isticmaalo Kaarkaaga eWIC Diiwaanka
Dib u eeg liiska liiska wax gadashada ee laga helo wakaaladda deegaankaaga ee WIC ama weydii dukaannada daabacaad dheellitirka dheeftaada ah.
Liistada dukaamaysigu waxay aqoonsan doontaa dhammaan gargaarka cuntada ee laga heli karo kaarka eWIC.
* Kaarkaaga eWIC waa la xiri doonaa ka dib toddobo (7) isku day PIN oo aan dhicin. Booqo wakaaladda deegaankaaga ee WIC si aad u furato kaarkaaga.
Marka macaamil ganacsi WIC dhamaado, waxaa lagaa rabaa inaad kaadhkaaga iska saarto oo cod ama qaylo ayaa dhawaaqi doonta.
Oggol - Sheygan waxaa loo oggol yahay Missouri WIC! Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin ma ahan qayb ka mid ah dheefahaaga cuntada ee WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah ayaa hela caano dhan. Haddii aadan ku haysan cunug hal sano jir ah qoyskaaga, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caano dhan diiwaanka. Ilaa faa'iidooyinka WIC ay ku xirmaan barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" waxaa laga yaabaa inaan lagu dabakhin dheefaha qoyskaaga.